Gwachapu Sichapụ PET Nkiri
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:PET foil,PET nkiri,PET,ihe nkiri uzo,mbadamba uhie,
Home > Ngwaahịa > Ngosipụta Ngosiputa Nzuzo Na-eme Ncha
Ngwaahịa nke Ngosipụta Ngosiputa Nzuzo Na-eme Ncha , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, PET foil , PET nkiri suppliers / factory, wholesale high-quality products of PET R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Bipute Ngwa Nkịtị - Clear PET Plastic Sheet
Akwụkwọ Na-ede Akwụkwọ Na-enweghị Ihe Ọhụụ nke Na-ahụ Maka Mmiri A na-eji ihe ntanetị a na-emepe emepe mee ihe maka ịmịnye ya na ụdị ihe ndị ọzọ, dị ka mpempe magnet, iji nwetaghachi ya. N'ihi na PET na-adabere na nnukwu ihe nkiri polyester dị elu, na-enwe ezigbo ihu igwe . N'otu oge ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma...
Mpempe akwụkwọ Ngwa - Ngwa doro anya PET Nke a PET na-adabere n'elu ihe nkiri polyester dị elu. N'otu oge ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nkenke ziri ezi na ụcha nke ọma, na-akwado ikpochapụ akọrọ. Site na ọkachamara a, a na-eji ihe nkiri a eme ihe maka ebe a na-ejikọta ya na ụdị ụdị ihe ndị ọzọ, dịka nkedo...
China Ngosipụta Ngosiputa Nzuzo Na-eme Ncha Ngwa
Nke a PET na-adabere n'elu ihe nkiri polyester dị elu. N'otu oge ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nkenke ziri ezi na ụcha nke ọma, na-akwado ikpochapụ akọrọ. Site na ọkachamara a, a na-eji ihe nkiri a eme ihe maka ebe a na-ejikọta ya na ụdị ụdị ihe ndị ọzọ, dịka nkedo magnet, iji nwetaghachi ya.
Ihe nkiri a na-acha uhie uhie na-adabara maka akara aka na-acha ọcha. Jide ya na mgbidi ma ọ bụ windo ka ọ bụrụ uhie, Akwụkwọ edere, dị mfe ihichapụ, na-ahapụ enweghị nchịkọta.
ihe nkiri uzo
PET foil PET nkiri PET ihe nkiri uzo mbadamba uhie Nwa ojii Agba ojii